arsenal - Synonyms of arsenal | Antonyms of arsenal | Definition of arsenal | Example of arsenal | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for arsenal
Top 30 analogous words or synonyms for arsenal
အာဆင်နယ် အာဆင်နယ် ဘောလုံးကလပ် (Arsenal Football Club) ကို The Gunners ဟုလည်းခေါ်ဝေါ်ကြပြီး လန်ဒန်မြောက်ပိုင်း ဟော်လိုဝေး(Holloway, North London) တွင် အခြေစိုက်သော အင်္ဂလိပ်ကြေးစားဘောလုံးကလပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အာဆင်နယ်သည် ပရီးမီးယားလိဂ်တွင် ပါဝင်ကစားသော အသင်းတစ်သင်းဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်ဘောလုံးလောကတွင် အအောင်မြင်ဆုံးဘောလုံးကလပ်များတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ ပထမတန်း နှင့် ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလား ၁၃ ကြိမ်ရရှိခဲ့ဖူးပြီး အက်ဖ်အေဖလားကို ၁၁ ကြိမ်ရရှိခဲ့ဖူးသည်။
ဝါနာဗွန်ဘရောင်း NASA was established by law on July 29, 1958. One day later, the 50th Redstone rocket was successfully launched from Johnston Atoll in the south Pacific as part of Operation Hardtack I. Two years later, NASA opened the Marshall Space Flight Center at Redstone Arsenal in Huntsville, and the ABMA development team led by von Braun was transferred to NASA. Inaface-to-face meeting with Herb York at the Pentagon, von Braun made it clear he would go to NASA only if development of the Saturn was allowed to continue. Presiding from July 1960 to February 1970, von Braun became the center's first Director.